कोरोनाबाट पोखरामा थप तीन जनाको मृत्यु - Parichay Network
कोरोनाबाट पोखरामा थप तीन जनाको मृत्यु
परिचय नेटवर्क द्वारा	 ९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०७:२५ मा प्रकाशित
कोरोनाका कारण पोखरामा थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले आइतबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार तीन जनाको मृत्यु भएको हो ।
पोखरा महानगरपालिका १ का ४२ वर्षीय पुरुष, पोखरा २२ का ६८ वर्षीय पुरुष र पोखरा ३१ क ५८ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्माले जानकारी गराएका छन् । पोखरा १ का पुरुषको शुक्रबार बेलुका ७ः ४५ बजे चरक मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । न्यूमोनियाको बिरामी ति पुरुष स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि असोज ३० गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनमा कात्तिक ३ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
यस्तै, पोखरा २२ का पुरुषको उपचारका क्रममा शनिबार बिहान ९ः३० बजे गण्डकी मेडिकल कलेजमा निधन भएको हो । उनी पनि न्यूमोनियाका बिरामी हुन् । स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि कात्तिक ७ गते अस्पताल भर्ना भएका ति पुरुषमा कात्तिक ६ गते नै कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो ।
पोखरा ३१ का ५८ वर्षीय पुरुषको शनिबार अपरान्ह ४ः२५ बजे पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आई.सि.युमा उपचारका क्रममा निधन भएको डा. शर्माले बताए । उनी न्यूमोनिया, हाईपरटेन्सन र मधुमेहका बिरामी थिए । कात्तिक ७ गते अस्पताल भर्ना भएका उनमा सोही दिन कोरोना पुष्टि भएको थियो ।